Yikuphi isiphequluli engcono-Windows 7? The best, esheshayo kanye isiphequluli yakamuva-Windows 7
Yikuphi isiphequluli okungukuthi engcono-Windows 7? The best, esheshayo kanye zakamuva isiphequluli-Windows 7
Kuleli zwe lanamuhla, ukubaluleka bayanda yiyona network Inthanethi. Ngakho ungamangali at yokuthi isiphequluli namuhla - hhayi nje uhlelo kokubonisa amakhasi ewebhu, futhi mhlawumbe isicelo ebaluleke kakhulu kuyo yonke i-computer.
Ngoba nalo, asimane travel yonkana expanses of inethiwekhi, kodwa sife eziningi ezidingekayo izenzo: umsebenzi ekukhokheleni ukuthengwa, ukuxhumana nabangani ngakolunye uhlangothi lomhlaba, kanye bhala isicelo esidlangalaleni iziphathimandla.
Akumangalisi ukuthi abantu abaningi njalo ngohlobo lwesiphequluli kungcono kakhulu-Windows 7 kanye nezinye izinhlelo zokusebenzisa. Phela, impendulo efanele lo mbuzo akuxhomekile nje kuphela esimweni lula umsebenzi nsuku zonke, kodwa futhi nokuphepha yayo. Cabangela izinhlobo ezivamile iziphequluli Inthanethi, ukuxoxa amathuba abo kanye nobubi obuthile.
Mhlawumbe, cishe bonke abasebenzisi yishumi edlule waqala yakhe ajwayelane World Wide Web kusuka kuleso siphequluli. Isizathu sisobala - kuba Explorer efakwe njengendlela ithuluzi ejwayelekile ukubuka amakhasi ewebhu ku iningi amakhompyutha ezweni lethu.
Uzokwenza Kufanele kuqashelwe ukuthi ngo-2001, lapho ngifika Windows XP, i-Internet Explorer 6, okuyinto bekuyingxenye OS awuzange nje ezinhle, kodwa waba okungcono ngesikhathi isinqumo. Kunoma ikuphi, amathuba anjalo abakwazi ukunikeza zonke ezinye iziphequluli Inthanethi. I-Windows 7, i-IE akuyona ahlobene izimbangi on the spot akazange ame.
Izizathu "ukulahlekelwa ithemba"
Ngokulinganiswa isivinini kanye nokuvikeleka okusezingeni eliphezulu wenzé lolu hlelo omunye ethandwa kakhulu emhlabeni ngokushesha. Ngeshwa, i-Microsoft Sebekhohlwe nya ukuthi isiphequluli kuyadingeka ngezikhathi ukuvuselela. Ngo-2001 wakhulula IE 6, IE 7, kodwa uvele 2006. Ukuze emihlanu edlule, izimbangi wenza elikhulu igxathu phambili, izinto zakuqala emhlabeni wonke umholi we isiphequluli emakethe okungukuthi manje indima catch-up kuze kube phakade.
By the way, isiphequluli kangcono-Windows 7, uma sikhuluma ngokukhethekile ngomkhaya IE? Isimanga siwukuthi kodwa-Internet Explorer 11 muhle ngempela. Yiqiniso, amahemuhemu mayelana ijubane lakhe Amazing kancane ihaba, kodwa lolu hlelo lusebenza ngempela smartly.
Ngeshwa, inguqulo evamile (IE 9-11) itholakala kubanikazi ngaphansi Windows Vista / 7 nangaphezulu kuphela. abanikazi XP kuyodingeka ushintshele ku into yesimanje, noma khetha isiphequluli ezahlukene. Ngakho lapho isiphequluli engcono-Windows 7?
Lesi siphequluli sekukhona esanda kutholakala. Njengoba i-Google Inc. uye emhlabeni wonke nokuqashelwa ku global IT-umphakathi, ngaleso sikhathi kukhona okuncane ukungabaza ultimate impumelelo, lapho zalo ochwepheshe wamemezela ukuqala umsebenzi ukudalwa ayo lesiphequluli.
Isidingo salokhu ngesikhathi "Google" kuyinto kade kwenzeka: naphezu ubuhlobo kakhulu nge Mozilla manje, Nhlangano wayenesithakazelo imikhiqizo yabo futhi amasevisi. Ngaphezu kwalokho, unelungelo ibe ngokwakhona search engine-Firefox, i-Google okhokhela izigidi zamaRandi unyaka ngamunye, ukuze abadali yayo kwakuyozuzisa "push" we ukhetho.
Konke lokhu izinhlelo ziphumelele ingxenye kuphela.
Ake uqale nge yokuthi namuhla "i-Chrome" ngempela isiphequluli ethandwa kakhulu. Yawafica Firefox ne-IE, kutuswa ehola IT-editions. Lokho-Chrome akuyona kuphela ukusebenza, kodwa futhi isiphequluli lula kakhulu futhi evikelekile.
Yilokho bathandile yena Wabasaqalayo: ukucupha ubuncane, ukuphepha, kanye nokusebenza high-speed. Iphinde isekela ezihlukahlukene izandiso ngawo kulesi siphequluli-Windows 7 ikani iqhubeka yanda yayo ukusebenza.
Yiqiniso, kufanele uqaphele ijubane eliphezulu Amakhasi ayezinikela. Kuyinto lesi sici esihle kubonakala ngokuyinhloko.
Ezinye izici ezingezinhle
Ngeshwa, le lula - legumbi "chrome". Yebo, abantu abaningi abafana interface lula esingavunyelwe ugcwale imininingwane. Kodwa ngasizathu simbe developers wanquma ukuthi lokhu Minimalism kufanele luhlanganise lonke: isiphequluli kungekho izilungiselelo ezithuthukile, futhi abaningi imenyu izinto ngokweqile lula.
Ngokwesibonelo, kungani abakwazi ukubeka isithombe sakho ayizintandokazi ideskithophu, umane ngokukhetha into okuhambisanayo kwimenyu yokuqukethwe? Kuyinto ongaziwa ukuthi ukuthuthukisa isiphequluli-Windows 7, onjiniyela ngandlela-thile akazange unake into banal enjalo.
Ngokuqondene ongaphakeme system imithombo, lokhu ke kungenziwa ukhohliwe kalula. Ngokwesibonelo, okumsulwa kakhulu (ngezelulo lemitsatfu nobe lemine) siphequluli waqala ngokuphindwe kathathu (!) Kwathatha isikhathi eside kunenyanga IE kukhompyutha isilinganiso.
Hhayi kahle kakhulu, kubukeka nokusatshalaliswa izinsiza ngezinqubo amaningi. Kuphela amathebhu ezintathu noma ezine ngezithombe kungaba uvalwe "hang" ikhompyutha 2 GB we-RAM, kuyilapho FF eziphawulwe ngenhla okunzima usebenza kule modi ngaphandle ukugxekwa kakhulu. Bafune kanye kwahluka siphequluli kuphela "Safari". I-Windows 7, okwamanje ukuthuthukiswa yayo kuyekisiwe.
sici elibuhlungu "i-Chrome" futhi zokungazimiseli yayo asebenzayo ukusebenza okuhle ku-inthanethi. Uma sikubeka kalula, uma uzama ukuvula ukulondolozwa ikhasi lewebhu ngaphandle yokuxhuma lesipheqi se-Inthanethi ngokuvamile iphutha.
Futhi omunye lokususa eziphathelene abathandi skinnable isiphequluli sakho esilindele. injini Blink, eye-Google cishe ayisekeli ngokwezifiso. Zonke "izindikimba" oluphumayo ngandlela-thile Ungashintsha ukubukeka isiphequluli, kukhona Izinketho zemibala kuyinsakavukela.
Angazi uhlale eceleni futhi Russian "Yandex": baqamba "isiphequluli engcono" yabo-Windows 7. Yiqiniso, kuthi ebizweni akazange acabange isikhathi eside, ebiza kusiphequluli esisha "Yandex Isiphequluli". Nokho, "omusha" lingahunyushwa ngokuthi ngokusemthethweni kuphela, njengoba futhi isekelwe ngokuphelele-Chrome.
Nokho, izinguqulo zamuva of isimo nale Clone uqala ngokuphelele ukushintsha: kukhona usekelo igundane ukuthinta, liye lathuthuka kakhulu design. Ngakho abaningi kakade ngokwethukela qhathanisa "Yandex Isiphequluli"-Windows 7 kanye "Opera" ubudala, okuzoxoxwa ngezansi.
abasebenzisi Enye kweminyaka emihlanu noma eyisithupha edlule, ngisho nalapho ADSL yayiyivelakancane, futhi 3G ubuchwepheshe kwakubhekwa njengesenzo gimmick kwezilwandle, isihambile isiphequluli yethu ezweni №1 kwaba "Opera". Futhi lokhu naphezu kweqiniso lokuthi lonke izwe ukudalwa program Norwegian yaziwa kodwa ayizange ithole ukusatshalaliswa ekhethekile.
Lokhu kungenxa yokwanda Internet kanye izinga lobuchwepheshe ezweni lethu. Lapho iningi labantu Namanje usebenzisa Dayela Up, futhi izindleko megabyte Internet mobile okuningi okufana ibhakhodi emazweni akude, iyiphi i-akhawunti kwaba njalo kilobyte traffic mobile.
"I-Opera", eyayintula "Turbo" Imodi kwaba insindiso yangempela. Uma umsebenzisi ethanda khona, traffic waqala ukuhamba ngokusebenzisa amaseva third-party, kanyekanye zincipha. Amanye amakhasi kwehle ngo-40% noma ngaphezulu. Kulula ukukubona ngeso lengqondo konke imali malini ngesikhathi kulondolozwa isiphequluli esheshayo-Windows 7.
Ngaphezu kwalokho, abasebenzisi abaningi ngazwi linye neyaziwayo ukuthi Opera - isiphequluli elula kunazo esekela ngokwezifiso pheze ephelele izakhiwo zohlelo bona, ube "repertoire" yakhe eminingi igundane ukuthinta, ngokushesha ngekhanda ukuze automaticity, ngokusiza kahle phezu Internet.
Ngeshwa, kwakukhona inezici ezithile ezingathandeki. Abasebenzisi abaningi abanolwazi nge ukungajabuli bathi ngamunye inguqulo entsha ye "Opera" waba ngaphezulu futhi ongenakunyakaziswa ngaphezulu. Ekuqaleni okungukuthi futhi kakhulu akazithokozisanga yokubuyekeza lokho akusho ngokuzenzakalelayo yokuthola kubo futhi thwebula.
Akubona bonke Ukushintshwa ngcono ...
Ngu inguqulo 12 th of yokuhamba kancane isiphequluli kanye nezimfuno zabo ku system imithombo has ekugcineni ukhathele abasebenzisi kakhulu, kodwa kukhona futhi Opera Software uye walungisa abalandeli bayo enye "ukumangala".
Entsha abanikazi inkampani nge isasasa yamemezela ukuthi lalo Presto injini intando ayisekho ukuthuthukisa, futhi salandelwa Blink corporation-Google. Ngenxa yalokho, isiphequluli empeleni kabusha, ukulahlekelwa ku-70% we amakhono ayo. I Onjiniyela athembisa kancane kancane ukubuyela kubo. Ngakho, esanda kutholakala benza isinyathelo "wamavukelambuso 'ngempela ukubuyela" Opera "abampofu ithebhu.
Ngakho manje-Opera kungabonwa njengoba nje omunye Clone "i-Chrome", nazo zonke izinzuzo zakamuva kanye nobubi obuthile.
Legendary isiphequluli esekelwe ezingasasebenzi Netscape Navigator. Le nguqulo yokuqala yayinzima, kodwa kukhipha 2.14 futhi kamuva ukukhishwa ekugcineni waqinisekisa ukuthi inkampani oyiwonawona.
Zonke iziphequluli zakamuva-Windows 7 kwezinye ukukopisha nomunye, kodwa "Ognelis" njalo wama yedwa. Sici Its esiwuphawu kwaba ibhekwa, ngayo nefunda ngayo hhayi isiphequluli emangalisayo kakhulu, ungenza into ekhethekile, ukujwayeza ngokugcwele ncamashi izidingo zakho.
Ebuswa zonke: ukubukeka kanye nosayizi Izilawuli, ukuhlanganiswa izici ezintsha futhi ngisho nezinhlelo ezincane azimele wodwa. Futhi onjiniyela baye bazama ukujabulisa bonke abantu: kubasebenzisi ethuthukile kukhona izilungiselelo ezithuthukisiwe, kanye Wabasaqalayo bamenyiwe isiphequluli sasivumela elula ukuthi akuyiphazamisi isifundo esizimele amathuba ayo.
Ngakho lapho isiphequluli engcono-Windows 7? Ngokusekelwe ezingenhla, singabona bafinyelele esiphethweni elula ukuthi umsebenzisi isilinganiso kukho ezifanele kakhulu kukhona i-Google Chrome noma i-Firefox. Basuke bethuthuka futhi besekelwa ngumuntu omkhulu inombolo ochwepheshe kanye namavolontiya, ayakhula ngokushesha futhi sipho yayo abasebenzisi yasakazwa kungenzeka amathuba.
Okubaluleke kakhulu, kuba yokuthi zonke lezi iziphequluli ngokusemthethweni bonke onjiniyela ezinkulu software third-party. Uyoba awunankinga ukuhlanganiswa phakathi "i-Chrome" noma FF-plug-in for "unyakazisa" ifayela, isicelo esikhethekile-anti-virus noma into efana naleyo.
Ngeshwa, kukhona sinazo: esishunyekiwe cishe yonke imaliwe kalula kuzo, uma ungakhathazeki ukuthola isofthiwe unqulo wesi arab.
Indlela Yokwenza Amaringithoni ngokuba iphone
Ngosizo lokho isheke kwikhompyutha yami
Kanjani ukuze ushintshe usayizi wesithombe "Photoshop", ukugcina olinganise?
Ikhaya yokuqopha: uhlelo zokuqopha umsindo umbhobho
Android OS: indlela ukufaka apk
Kwaselwandle isaladi 'Sea cocktail'
I Vietnam War
Kusukela ugwadule kuya ikota kwamasiko: Theatre Square Petersburg
18 Septhemba - Virgo
Setha «Renovator» amathuluzi: ukubuyekezwa kanye nakho
Izidakamizwa "Immudon" imfundo